Bing wuxuu ku daraa CDC coronavirus is-checker chatbot bogga natiijooyinka raadinta | BehMaster
Bogga ugu weyn/Content Suuq/Bing waxay ku dartay CDC coronavirus chatbot is-hubi bogga natiijooyinka raadinta
Bing waxay ku dartay CDC coronavirus chatbot is-hubi bogga natiijooyinka raadinta
Bing's "corona" iyo "coronavirus" bogagga natiijooyinka raadinta ee la xiriira hadda waxay ka kooban yihiin Xarumaha Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada (CDC) Coronavirus is-baaritaan sida joogtada ah, chatbot la ballaarin karo.
Isticmaalayaasha waxay la falgali karaan is-baaraha midigta bogga natiijooyinka raadinta si ay u qiimeeyaan astaamahooda oo ay u helaan hagitaan.
Is-baaraha Coronavirus CDC ee Bing.com.
Sababta aan u danayno
Hawlaha wada sheekaysiga ayaa ka soo muuqday natiijooyinka raadinta Bing ee la soo dhaafay, laakiin tani waa markii ugu horeysay ee mid si muuqata u soo muuqdo. Bing waxa laga yaabaa inay ku dabaqdo sifada noocaan ah meelo badan oo raadinta dhexdeeda ah.
Waxaan la soconay boggaga natiijooyinka si aan u aragno sida ay u korayaan inta lagu jiro cudurka faafa. Waxaad ku arki kartaa isbeddelada maqaalkeena asalka ah, Corona ilaa COVID: Sidee buu u kobcay bogga natiijooyinka 'corona' ee Google.
Wax badan oo ku saabsan warka
Is-baaraha ayaa waydiisanaya isticmaalayaasha ogolaanshaha iyo goobta, xogta tirakoobka iyo calaamadaha. Iyada oo ku saleysan macluumaadka, waxay soo saartaa talo sida "Guriga joog oo la soco calaamadahaaga. Wac bixiyahaaga haddii aad ka sii darayso," ama " Wac 911 - Waxaa laga yaabaa inaad leedahay xaalad degdeg ah oo caafimaad."
Is-baaraha ayaa la sameeyay iyadoo la adeegsanayo adeegga Microsoft's Healthcare Bot, shirkaddu waxay ku dhawaaqday bishii Maarso.
Bogga natiijooyinka Google ee "corona" kuma jiraan chatbot-ka, laakiin wuxuu muujinayaa isku xirka is-hubi ee ku dhex jira sanduuqa "Caawinta iyo macluumaadka".
Wax badan oo ku saabsan suuqgeynta waqtiga coronavirus
Bing waxay ku darsataa kontaroolada jajabka si ay uga caawiso goobuhu inay xakameeyaan aragtidooda natiijada raadinta
Sida loo Regram-ka Instagram-ka: 5 La isku dayay iyo Hababka Runta ah
6-da Aaladood ee Sameeya Sahan Bilaash ah ee ugu Sareeya Suuqgeeyayaasha
10 Sababood oo aad ugu Baahan Tahay Xeelad Wax-ku-ool ah oo Muddada Dheer ah
Sida Loo Mideeyo Elementor iyo Mailchimp (5 Tallaabo)